Albaniana avy ao Makedonia Nivoaka ny Tsipika Ara-Poko Handatsa-Bato Ivelan’ny Antoko Mitondra · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 28 Desambra 2016 4:46 GMT
Saina Albaniana sy Makedoniana tafaray tao amin'ny hetsika anti-fasista iray tao Skopje tamin'ny 11 Oktobra 2016. Sary avy amin'i Vančo Džambaski, CC BY-NC-SA.
Toe-javatra tsy fanaon'ny ao Balkan no nitranga nandritra ny fifidianana Makedoniana. Raha tokony handrotsa-bato ho an'ny antokon'ny foko misy azy, dia maro tamin'ireo foko Albaniana no nanapa-kevitra hifidy ny mpanohitra ao amin'ny Demaokraty Sosialy (SDSM), izay vao avy nanova ny endrik'izy ireo ho marofoko kokoa.
Mandalo lalan-tsarotra ankehitriny i Makedonia amin'ny fandrafetana governemanta vaovao taorian'ny fifidianana parlemantera tamin'ny 11 Desambra. Mampiady hevitra ny voka-pifidianana voalohany — ary misy manohitra — ka tsy ho fantatra loatra hoe iza no hahazo mpikambana ao amin'ny parlemanta bebe kokoa any amin'ny farany any. Na dia mbola hita mazava aza fa mitarika ireo antoko mpitondra, dia miharihary kosa fa nihintsana aoka izany ny fanohanana azy ireo raha oharina amin'ireo fifidianana efa nisy teo aloha.
Fotoana manantantara eo amin'ny vahoakan'i Makedonia izao fotoana izao, indrindra fa ho an'ny vondrom-piarahamonina Albaniana, izay sambany nanolotra isam-bato tsy azo tsinontsinoavina ho an'ny antoko iray ao amin'ny fanoherana izay noheverina teo aloha ho anjakan'ny ‘foko Makedoniana.’ Manana anjara toerana lehibe eo amin'ny politika Makedoniana ny resa-poko, ary ny Albaniana no foko faharoa betsaka olona indrindra ao amin'io firenena io. Saingy tamin'ity indray mitoraka ity, nampiditra foko Albaniana tao amin'ny lisitry ny kandidàny ho ao amin'ny parlemanta ny SDSM, nanokatra birao ifotony ary nanatontosa fivoriana tany amin'ireo monisipalite betsaka foko Albaniana.
Na izany aza, dia mbola maro amin'ireo Albaniana no nifidy ny antoko ara-poko Albaniana avy amin'ny Democratic Union for Integration (DUI na Firaisana Demaokratika Tsimanavaka), izay nahazo toerana parlemantera 10. Anisan'ny antoko mitondra ny DUI, ary nahamari-toerana ny fiarahan'ny ao amin'ny governemanta –anjakan'ny foko Makedoniana avy ao amin'ny VMRO-DPMNE — hatramin'ny taona 2008. Nidina avy amin'ny toerana 19 azon'ny mpikambana ao amin'ny DUI nandritra ny fifidianana tamin'ny taona 2014 anefa izany rehefa atao ny fanombanana, taona talohan'ny natafalatsaka ireo tao amin'ny mpiara-dia tao anaty fahatafintohinana maro dia maro naterak'ireo fihainoana an-tsokosoko ny resaky ny mpampita vaovao, mpikambana ao amin'ny fanoherana, mpikambana ao amin'ny governemanta sy ny hafa.
Sarin'i Nikola Gruevski namboarina nampiasaina betsaka ao amin'ny media sosialy hampiroboroboana ny fanangonan-tsonia.
Ireo fandraketam-peo [an-tsokosoko] ireo dia voalaza fa natao noho ny baikon'ny Praiminisitra teo aloha Nikola Gruevski, mpitarika ny VMRO-DPMNE amin'izao fotoana izao. Nanomboka ny fanangonan-tsonia an-tserasera ny sasantsasanny amin'ireo olom-pirenen'i Makedonia avy amin'ny foko Albaniana tamin'ny 14 desambra hilazan'ireo antoko politika Albaniana “TSIA” amin'ny VMRO-DPMNE sy Gruevski rehefa tonga ny fotoana handrafetana governemanta. Nahazo latsabato anjatony maro tao anatin'ny ora vitsivitsy ny fanangonan-tsonia, ary nifampizarana tao amin'ny media sosialy.
Niandronan'ny fahatezeran'ny Albaniana ihany koa ny VMRO-DPMNE nandritra ny fanentanam-pifidianana, rehefa manao tenim-pankahalana hamelezana Albaniana “voaafina” matetika ry zareo — antony lehibe iray hafa mahatonga ny sasantsasany ao amin'ny fiaraha-monina tsy tia ny iarahan'ny antoko politika Albaniana hiasa miaraka amin'ny VMRO-DPMNE.